ရေပြင်ညီဖိအား « MMWeather Information BLOG
ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တို့ဖြင့် မိုးလေဝသအခြေအနေကို ခန့်မှန်း လေ့လာခြင်း
By mmweather.ygn, on March 29th, 2013%
NOGAPs (U.S.Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model) ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများသည် တိမ်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ၊ အထူအပါးနှင့် ရွေ့လျားမှုတို့ကို ဖေါ်ပြပြီး ကောင်းကင်မှ တိမ်ကင်းစင်မှု အခြေအနေ နှင့် မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုတို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း အပူချိန်၊ ဖိအား၊ လေတိုက်ခတ်မှု နှင့် အမြင့်ပေအလိုက် ကွဲပြားသည့် အခြေအနေတို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ကွန်ပျူတာ မော်ဒယ်နှင့် ဂြိုလ်ဓါတ်ပုံ (၂)မျိုးပေါင်းစပ်ထားခြင်းမှ ရရှိသော ရလဒ်များကို ပုံတွင် ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Satellite pictures providearealistic depiction of cloud cover, texture, and movement. They can . . . → Read More: ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တို့ဖြင့် မိုးလေဝသအခြေအနေကို ခန့်မှန်း လေ့လာခြင်း
Leaveacomment နည်းပညာ, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးလေဝသအခြေအနေ, ရေပြင်ညီဖိအား, လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေ ပင်လယ်ရေပြင်ညီ ဖိအား
By mmweather.ygn, on July 8th, 2011%
Legend [slideshow id=12] Leaveacomment ရေပြင်ညီဖိအား MSL-ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်-ဖိအား Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum